XOG CUSUB: Yuusuf Garaad oo la cunaqabateeyay & Waxyaabihii uu kala kulmay Farmaajo & Kheyre | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
XOG CUSUB: Yuusuf Garaad oo la cunaqabateeyay & Waxyaabihii uu kala kulmay Farmaajo & Kheyre
Wasiirka arimaha dibadda Xukumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo Madaxweyne Farmaajo.
Cadaadiskan oo sii xoogeysanaya ayaa sababay in Wasiirka uu gudan waayo shaqadii ay aheyd inuu qabto ee uu ku magacownaa.
Shaqooyinka laga hor istaagay
Wasiir Yuusuf Garaad ayaa si lama filaan ah loogala wareegay shaqadii qaban qaabada Shirkii London oo ay aheyd inuu hogaamiyo.
Sidoo kale, madaxweynaha DFS ayaa 7 safar dibadda ku aaday halka Wasiir Yuusuf Garaad uu kaliya labo mar dalka ka baxay iyadoo ay aheyd inuu noqdo wasiirka ama masuulka ugu safarka badan maadaama uu Soomaaliya aduunka uqaabilsan yahay.
Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa socdaalkisii dalka Qatar usheegay Yuusuf Garaad inuusan raaci doonin isagoo badalkiisii watay Ku xigeenkiisa.
Sidoo kale wasiirka qorsheynta Amb Jamaal ayaa wafuud caalami ah gaar ahaan midowga Yurub ah kula kulmay Muqdisho taas oo muujineysa in shaqadii Yuusuf Garaad uu wasiir kale qabanayo.
SABABTA ay Madaxda DFS Cadaadiska usaareen Yuusuf Garaad
Tan iyo markii ay golaha wasiirada xilka ka qaadeen Hanti-dhowrihii qaranka Dr Nuur Faarax Isla markaana uu Yuusuf Garaad dalbaday in arintaas laga fiirsado ayay bilaabatay in cadaadiska la saaro.
Sidoo kale, Yuusuf Garaad ayay madaxda DFS ku eedeeyeen inuu xakameyn waayay beesha uu kasoo jeedo taas oo iyagoo hubeysan soo galay madaxtooyada isla markaana xabsi gurigii kala soo baxay hanti-dhowrihii qaranka.
Madaxda dowladda ayaa dhanka kale Yuusuf Garaad wax ka weydiiyay in Kaamirooyinka ay qabteen isagoo aan si aan wanaagsaneyn ula hadlaya Saxaafada xili uu madaxweyne Farmaajo ka dhoofayay Muqdisho halka sidoo kale laga fidiyay inuu garoonka diyaaradaha ka qaadanayay Laaluush sida ku cad muuqaalo ay kaamirooyinka qabteen.
Wararka haatan la helayo ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu kulan dheer kadib u ogolaaday Yuusuf Garaad inuu shaqadiisa wato, laakiin waxaa looga digay inuu sameeyo falal lidi ku ah dowladda.
Si kastaba, Yuusuf Garaad oo Xukumadda Soomaaliya umatala beesha Habar Gidir ayaa cadaadis xoogan ka wajahaya dhana beeshiisa oo ku andacooneysa in xaquuqdii ay kalahaayeen dowladda ay waayeen.